Ngathi | ILANGA LASEKHAYA CO., LTD
I-Sunsum yasekhaya Co., Ltd.ise-Ningbo City, kwiPhondo Zhejiang, nto leyo isixeko izibuko ebalulekileyo kunxweme mpuma China. Isithethe sorhwebo lwangaphandle lwexesha elide kunye nethuba lokuba kufutshane nezibuko lamanzi anzulu lenze i-Ningbo isixeko esinorhwebo lwangaphandle kwaye savelisa iinkampani zorhwebo zamanye amazwe ezifana nenkampani yethu.
Inkampani yethu iye eneemfuno ezizodwa kwiintengiso zeplastiki, isinyithi kunye nemveliso yekhaya abicah kunye nezipho zokwazisa kwimarike yamazwe aphesheya ngaphezulu kweminyaka eli-10. Iimveliso zethu eziphambili kuquka ware indlu & ukusela ware series.
Umzi mveliso wethu wokusebenzisana waphicothwa yiDisney, NBCU, AVON, Sedex, BSCI. Ngolo phicotho-zincwadi olufanelekileyo, siye sasebenzisana nolona hlobo lweelayisensi, ezinje ngeDisney, i-Minions, iMatel, i-DC, iMarvel, iPaw Patrol. Kananjalo thumela iimpahla ezininzi kwivenkile enkulu enjengeTesco, Coles.
Sineqela leQC lobuchwephesha, iinkqubo zokuhlola ezingqongqo, kunye nokugcina ukusebenzisana okusondeleyo kunye neearhente zokuhlola kunye neearhente zokuvavanya ukubonelela abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu.
Sinezinto ezinamandla ze-OEM kunye ne-ODM, ukugqitywa komphezulu, ukuprinta ilogo kunye nokupakisha kunokwenziwa ngokwezifiso. Ukubumba kungacutshungulwa ngokweesampulu kunye nemizobo ebonelelwe ngabathengi.
Sineminyaka engaphezu kwe-10 yamava oshishino kunye nokuqina kokudityaniswa kokubonelela, sinokuphendula ngokukhawuleza kwiimfuno kwaye sinike iinkonzo ezikumgangatho ophezulu.
Siyazingca ngeendidi ngeendidi zeemveliso ngamaxabiso aphantsi kunye nomgangatho olungileyo, ukuphendula ngokukhawuleza, ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza kunye nenkonzo elungileyo. Ukusebenza nathi, uya kuziva inkonzo ekhethekileyo kunye ephezulu yeqela lethu lokusebenza. Sizinikezela ukwenza ishishini lakho libe lula kwinzuzo ephezulu.